Mikel Arteta oo ka hadlay barbarihii kooxdiisa la gashay kooxda Benfica koobka Europe League. Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Mikel Arteta oo ka hadlay barbarihii kooxdiisa la gashay kooxda Benfica koobka...
Mikel Arteta oo ka hadlay barbarihii kooxdiisa la gashay kooxda Benfica koobka Europe League.
Mikel Arteta ayaa ka digay Arsenal inay tahay mid naxariis badan ka dib markii ay ku qasbanaadeen in barbaro la galaan kooxda Benfica koobka Europa League lugta koobaad oo ka dhacday Stadio Olimpico.
Bukayo Saka ayaa barbareeyay wax ka badan labo daqiiqo ka dib markii Pizzi uu shabaqa ka soo taabtay kubad rigoore loo dhigay benfica iyadoo Emile Smith Rowe lagu ciqaabay inuu gacanta ku dhigay.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa si aan macquul aheyn u lumiyay fursad qaali ah oo uu ku hor dhigo Gunners qeybtii hore waxaana kabtanka uu qasaariyay labo fursadood oo kale shan maalmood ka dib markii uu seddexleey ka dhaliyay kooxda Leeds United.
Goolka banaanka ee Saka ee labada lugood ee ugu horeeya ee lagu ciyaaray garoon dhexdhexaad ah sababa la xiriira xayiraadaha safarka ee la xiriira coronavirus ayaa siinaya kooxda Premier League faa iido yar.
Tababaraha kooxda Arsenal Arteta ayaa ka carooday in kooxdiisu ay aad u khasaartay, in kasta oo ay ciyaarta ka dhigtay mid si fiican u soo baxday lugta labaad ee garoonka Georgios Karaiskakis ee Athens khamiista soo socota.
“Waxaan aad u xoog badneyd waxaanan abuurnay fursado waa weyn,” ayuu u sheegay BT Sport. Waa inaan noqonaa kuwa naxariis badan Waxay ahayd wax laga xumaado sida aan u gaarnay goolka Waxaan siinay kubbadda markaa waxay ahayd 1-1 dhammaantoodna waa inay u ciyaaraan.
“Waxaan gaarnay gees ka dib, geeska, si dhaqso leh ugama jawaabin waxaana laga dhaliyay rigoorada. Markaad eegto, way adag tahay in la xukumo. Waxaan helnay jawaab celin weyn waxaanan dhalinay gool weyn.
Waxaan isku daynay inaan sii wadno heerka Labada kooxba waxay hoos udhaceen 20-kii daqiiqo ee la soo dhaafay laakiin guud ahaan waa inaan dhulka uga baxnaa waxbadan.
Saka wuxuu ogyahay in Arsenal ay leedahay wax yar oo qalad ah ka dib markii 19 jirka uu noqday ciyaaryahanka ugu da’da yar Premier League kaasoo dhaliyay 10 ama kabadan oo goolal ah isla markaana bixiyay ugu yaraan 10 caawin tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii hore.
Xiddiga heerka caalami ee England ayaa yiri: “Waxay ku saabsan tahay maareynta ciyaarta Sanadkii la soo dhaafay markii aan u aadnay Olympiakos waxaan gaarnay guul nacasnimo ah Cagaha ma khaldami karno maxaa yeelay haddii aan sidaa yeelno waxaan nafteena ku adkaynaynaa.
Previous articleJoan Laporte oo ah musharax u taagan xilka barcelona oo Raba in halland lagu soo daro barcelona.
Next articleMauricio Pochettino oo ka hadlay mustaqbalka Xidiga Farance iyo PSG Kylain Mbappe.